dog အသုံးအနှုန်းများ - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on September 21, 2012 at 12:46 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီ forum မှာ တစ်ယောက်ယောက်ရေးထားဖူးသလားတော့မသိပါဘူး။ ရှိရင်တော့ နှစ်ထပ်ရှိတော့ မှတ်မိတာပေါ့လို့ နှလုံးမူပြီးဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။
မြန်မာစကားမှာခွေးကို မကောင်းတဲ့အနက်နဲ့တွဲဖက်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ “ခွေးကျင့်ခွေးကြံ”၊ “ခွေးဖြစ်သွားမယ်”၊ “ခွေးသူတောင်းစား”၊ “ဆင့်အ၀ှာခွေးမျှော်”၊ “ခွေးမြီးကောက်ကျည်တောက်စွပ်”၊ “ခွေအိုကြီးလက်ပေးသင်”၊ “ခွေးနဲ့ကြောင်လိုပဲ”၊ “ဆင်ခေါင်းခွေးချီ” ၊ “ခွေးတစ်ကောင်ကြောင်တစ်မြီးမှမရှိ”စသဖြင့်ရှိကြသလို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာလည်း ခပ်ဆင်ဆင်အသုံးတွေ၊ စကားပုံတွေ၊ အီဒီယံတွေရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ကိုလေ့လာဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
To be as sick asadog ခွေးတွေနေမကောင်းဖြစ်တာတွေ့ဖူးကြတယ်မဟုတ်လား။ စားထားသမျှတွေအကုန်အန်ထုတ်ပစ်တာပဲ။ ဒီလိုပဲလူတစ်ယောက်အော့အန်နေမကောင်းဖြစ်လို့ရှိရင် She is as sick asadog. လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
Every dog has its day! ခွေးတွေတောင်မှ သူ့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့နေ့တစ်နေ့ရှိပါတယ်တဲ့။ ဘယ်လောက်ပဲကံဆိုးလှပါပြီဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့နေ့မှာတော့ သူ့အတွက် ကံကောင်းခြင်းတွေ၊ အောင်မြင်ခြင်းတွေနဲ့ သာယာလှပတဲ့နေ့တစ်နေ့တော့ အနည်းဆုံးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာပါ။
အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ မိုးတွေကသည်းကြီးမည်းကြီးရွာနေ It's raining cats and dogs. တော့အပြင်ထွက်ဖို့ကတော့adog's chance မဖြစ်နိုင်သလောက်အခွင့်အရေးပါပဲ။
To be top dog မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ ခွေးနဲ့အနှိုင်းခံရတာအနာဆုံးအရိုင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအင်္ဂလိပ်စကားကတော့ အရေးအကြီးဆုံးထိပ်ဆုံးကပုဂ္ဂိုလ်လို့ရည်ညွှန်းတာပါ။ Henry is the top dog in his company.
go to the dogs မြန်မာမှာလည်း ခွေးဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလေ့ရှိတယ်မဟုတ်လား။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာရော အစအစအရာရာ ပျက်စီးယိုယွင်းသွားတယ်။ ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ This neighborhood is going to the dogs. လိုမျိုးပြောနိုင်ပါတယ်။
To live/leadadog's life အပေါ်ကနဲ့ခပ်ဆင်ဆင် အခက်ခဲအကြမ်းတမ်းဆုံးပျော်ရွှင်ရာမဲ့နေတဲ့ဘ၀အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာကို He maintained that he ledadog's life in the army. ဆိုတဲ့ဝါကျတွေမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ကြတဲ့အခါ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းစောင့်ထိန်းတဲ့သူတွေရှိသလို ကိုယ်အတွက်ရရင်ပြီးရော သူတပါးဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ် အမြီးကျက်အမြီးစားခေါင်းကျက်ခေါင်းစားလုပ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့အတွက်တော့ It'sadog-eat-dog business လို့ပြောကြပါလိမ့်မယ်။
လူတွေမှာစွဲမြဲလာတဲ့အလေ့အထ၊ တွေးခေါ်ပုံတွေ ကိုပြုပြင်ဖို့ရာအလွန်ခဲယဉ်းလှ ပါတယ်။ ခွေးအိုကြီးလက်ပေးသင်လို့မရ teach an old dog new tricks ဆိုသလိုမကြာခင်ဒုံရင်းပြန်ရောက်ကြတာပါပဲ။ လူတစ်ယောက်ကို မဟုတ်တမ်းတရားစွပ်စွဲမိပြီဆိုရင် bark up the wrong tree ပေါ့။ အကျိုးမဲ့အပြစ်တင်တာ၊ လမင်းကိုခွေးဟောင် barking at the moon တာမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။
Permalink Reply by Thet Htar Aung on September 21, 2012 at 22:07
Permalink Reply by Thin Zar Aye on September 22, 2012 at 9:56
Permalink Reply by 08px6tyz8vgd0 on September 22, 2012 at 10:20
Thank u ဆရာ။
Permalink Reply by Cho Mar on September 22, 2012 at 10:32
People like 'ready made' so thanksalot.
Permalink Reply by waiwaikhaing on September 22, 2012 at 10:57
thanks u so much,sir
Permalink Reply by Maha Swe on September 22, 2012 at 11:37
It is nice to read about dogs.
Permalink Reply by စောဆောင်းသိန်း on September 22, 2012 at 12:05
Permalink Reply by zawzawlwin on September 22, 2012 at 12:23
Permalink Reply by yin myo thu on September 22, 2012 at 12:37
I have got knowledge about idiom. thanks.
Permalink Reply by Moe Sandi Aung on September 22, 2012 at 13:36
Cat အသုံးအနှုန်းလေးတွေရှိရင်လဲရေးပေးပါဦး ဆရာ :)
Permalink Reply by 0f6sugjfi25y6 on September 22, 2012 at 15:11